Momba anay - Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd.
Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd. naorina tamin'ny aprily 2002, dia ao amin'ny Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Mpanamboatra matihanina mofomamy mica super-fine, flakes loko, flakes composite, vermiculite sns izay manana famokarana isan-taona maherin'ny 10.000 taonina. Ny kompania dia manarona faritra manodidina ny 30,000㎡, miaraka amin'ny faritra fananganana mihoatra ny 10,000㎡ ary tranobe birao 1,200㎡. Tamin'ny taona 2003, ny orinasanay dia nomena anarana ho "Enterprise of the Observation Contract & Keep Promise" nataon'ny Bureau Bureau of Industry and Commerce; Tamin'ny taona 2005 dia nomena anarana ho «Unit azo itokisana ho an'ny fikajiana kalitao» nataon'ny Lingshou County Technical Supervision Bureau; Tamin'ny 2009, nandany ny fanamarinana rafitra momba ny kalitao ISO9001: 2000.
Manana atrikasa 3 izahay, fiara forklift 3 ary fiara mpitatitra olona. Nahatratra 18 000 taonina isan-taona ny totalin'ny fahaiza-mamokatra ho an'ny karazan-vokatra rehetra miaraka amin'ny fatran'ny 100% fanaraha-maso ny vokatra.
Ny departemanta fanaraha-maso momba ny kalitao dia manana fitaovana fandrefesana ny haben'ny taratra laser mandroso, metatra fotsy, ny fifandanjana elektronika avo lenta, ny efijery mangatsiaka, ny lafaoro avo, ny famafaina, ny mpitaingin-tsofina, ny valizy fandrefesana, ny sieve tsindry tsy mety, ny valizy famonoana vy manakatona amerikana. fifandanjana elektronika portable, mini-pulverizer ary sieves maherin'ny 200 ary fitaovana fanodinana feno hafa.
Hatramin'ny niorenany dia efa nanolo-tena tamin'ny R&D ny fampiharana ny vokatra izahay ary nanome vokatra mpanamory fiaramanidina tsara ho an'ny andrim-pikarohana 100 mahery, raha nanangona fahalalana betsaka momba ny teorika amin'ny famerenany izahay, izay nanampy anay tamin'ny famatsiana ny mpanjifa tamin'ny voalohany -mototra ireo vokatra sy serivisy, manamafy ny fanahin'ny orinasam-pifandraisana lehibe "Tovokomina amin'ny integrité sy hamolavola amin'ny alàlan'ny fanavaozana".
Hatramin'ny niorenany dia efa nanolo-tena tamin'ny R&D ny fampiharana ny vokatra izahay ary nanome vokatra mpanamory fiaramanidina tsara ho an'ny andrim-pikarohana 100 mahery, raha nanangona fahalalana betsaka momba ny teorika amin'ny famerenany izahay, izay nanampy anay tamin'ny famatsiana ny mpanjifa tamin'ny voalohany -ritra ireo vokatra sy serivisy, fanamafisana ny fanahin'ny orinasa lehibe "Hiaina amin'ny famelomana amin'ny fahamasinana sy hamolavola amin'ny famokarana"
Ny vokatra vita amin'ny mica dia misy marika «發» dia malaza ankehitriny any amin'ny faritany 20 mahery ao Shina ary firenena sy faritra maro any ivelan'i Shina, ao anatin'izany ireo firenena avy amin'ny Vondrona Eropeana, Amerika Atsimo ary Azia Atsinanana.